Maitiro ekugadzira zuva rekuzvarwa nepati mavhidhiyo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kugadzira mavhidhiyo ezuva rekuzvarwa uye mapato emhuri nguva dzose kunonakidza uye kunounza vatori vechikamu kunyange padhuze, sezvo zvichizogara zvichikwanisika kudzora ndangariro idzodzo nekutanga vhidhiyo, pamwe makore mashoma mushure mechiitiko kana mushure menguva yakati yenguva. Nehurombo, havazi vese vashandisi vanoziva kutenderera uye rudzii rwechirongwa kana chirongwa chavanoshandisa kugadzira zuva rekuzvarwa nemavhidhiyo epati - echinyakare mavhidhiyo ekugadzirisa maturusi anogona kunge akaomarara kushandisa, pamwe nekudhura.
Kusangana nezvinodiwa nemunhu wese mune ino gwaro, isu takanyora maapplication akanakisa, mapurogiramu akanakisa uye nzvimbo dzakanakisa dzepamhepo kugadzira mavhidhiyo ekuzvarwa nepati, ichipa chete emahara maturusi ayo ari nyore kune vashandisi veavice kushandisa, uye neimwe nzira kunyange kunakidza.
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekugadzirira vhidhiyo kutenderera pati
Gadzira zuva rekuzvarwa kana pati yemavhidhiyo
Muzvitsauko zvinotevera tichawana akateedzana maturusi ekugadzira rako rekuzvarwa kana vhidhiyo yepati kubva kumavhidhiyo akanyorwa needu smartphone kana yedhijitari vhidhiyo kamera (yeavo vanayo). Sezvo kudhindwa kwevhidhiyo kuchigona kuitwa pane chero chikuva, isu tinokuratidza iwo mapurogiramu ePc, smartphone uye mapiritsi ekushandisa, uye kunyangwe nzvimbo dzepamhepo, kuti ugone kugadzira vhidhiyo yekuzvarwa nekungovhura browser.
Zvirongwa zvekugadzira mavhidhiyo ekuzvarwa
Chirongwa chatinogona kushandisa muWindows kugadzira zuva rekuzvarwa nemavhidhiyo epati iri EaseUS vhidhiyo mupepeti, inogona kurodha mahara kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Nechirongwa ichi tinogona kugadzira ekugadzira mavhidhiyo tichishandisa yakanaka sarudzo yemasefa, mhedzisiro uye vabatsiri kugadzira iwo akanangana mavhidhiyo, pasina kuve vakuru nyanzvi. Chirongwa ichi chinopihwa mahara murudzi rwekuyedza, asi mabasa ese anowanikwa ipapo kuti ushandiswe: kutaura zvazviri, miganhu chete yechirongwa ichi kuvapo kweshamhu rinotaridza chirongwa ichi pamwe nemuganhu wekutumira kunze. yemavhidhiyo akagadzirwa (anokwana 720p), yakapfuurwa zviri nyore nekutenga kunyoreswa.
Chimwe chirongwa chinonyanya kubatsira kuita mavhidhiyo emapati uye mazuva ekuberekwa ari Wondershare Filmora, inogona kurodha mahara maWindows uye Mac kubva pawebhusaiti yepamutemo.
Nechirongwa ichi tinokwanisa kugadzira mavhidhiyo akanaka kwazvo nekungobaya-baya mbeva: kazhinji zvinokwana kudhonza vhidhiyo faira kuti ugadzirise kuchirongwa chechirongwa uye sarudza imwe yemhedzisiro kana shanduko, kuti ugone kuita chete vhidhiyo yerudzi rwayo. Iyo yemahara chirongwa ine ese anodikanwa mabasa ekugadzira vhidhiyo yedu asi muchikamu chekutumira ichawedzera chitupa watermark: kana tichida kuibvisa, ingotenga rezinesi rekushandisa rezinesi.
Kuti uwane mamwe mapurogiramu ekugadzirisa ekugadzira zuva rekuzvarwa nemavhidhiyo epati, tinokurudzira kuti uverenge gwara redu Gadzira foto vhidhiyo, mimhanzi, mhedzisiro semufananidzo slideshow.
Kunyorera kugadzira mavhidhiyo ekuzvarwa
Isu tinoda kugadzira iyo yekuzvarwa uye yepati vhidhiyo zvakananga kubva kune yedu smartphone kana piritsi, tisingafanirwe kuendesa izvo zvemukati kuti zviigadzirise paPC? Mune ino kesi, tinokurudzira kuti iwe uedze iyo application nekukasira. Quik, inowanikwa mahara kune Android uye iPhone / iPad.
Iyo pasiwedhi ine chishandiso ichi inomhanya, muchokwadi zvichave zvakakwana kusarudza vhidhiyo kuti igadzirise uye sarudza imwe yeakawanda ekugadzirisa masitayera anowanikwa kugadzira yemhando vhidhiyo Iko kushandisa zvakare kunokutendera kuti uenzanise vhidhiyo nechero chidimbu chemimhanzi, cheka mativi evhidhiyo, uye wedzera mavara kana mazita. Iyo application ndeye mahara zvachose, haufanire kubhadhara chero kunyoreswa kana mamwe mabasa.
Chimwe chikumbiro chakazara kwazvo chekugadzira zuva rekuzvarwa nepati mavhidhiyo ari Magisto, inowanikwa mahara kune Android uye iPhone / iPad.
Neichi chishandiso unogona kugadzira akanaka uye anosetsa mavhidhiyo mumaminetsi mashoma, ingosarudza iyo yekutanga vhidhiyo, sarudza imwe yeyakagadzirira-kushandisa-yekugadzirisa masitayera (kune zvakare chimiro chemazuva ekuberekwa uye mazororo zvakajairika), wedzera zvitambi uye mhedzisiro uye pakupedzisira Tumira kunze vhidhiyo nyowani, kuti ugone kuigovana pasocial network kana mameseji ekunyorera. Iko kunyorera kuri mahara asi kune mamwe mabasa akabhadharwa, ayo mune chero mamiriro ezvinhu asingakanganise usability.
Kana isu tichida kuyedza mamwe mavhidhiyo ekugadzirisa ekunyorera, tinokurudzira kuti uverenge chinyorwa chedu. Iyo yakanakisa slideshow inogadzira maapplication eApple uye iPhone.
Nzvimbo dzepamhepo kugadzira mavhidhiyo ekuzvarwa
Hatidi here kushandisa zvirongwa uye kunyorera kugadzira zuva rekuzvarwa kana vhidhiyo yepati? Mune ino kesi, ingovhura chero webhu bhurawuza (inosanganisira Google Chrome) uye vhura Kapwing, inowanikwa online vhidhiyo mupepeti.
Iyo saiti inoshanda isina kunyoreswa uye inopa zvese zvinodikanwa maturusi ekugadzira iyo yaunoda vhidhiyo. Kuti uishandise, pinda bhatani Dzvanya kurodha kurodha vhidhiyo yekugadzirisa uye kushandisa maturusi ari pamusoro pehwindo kuwedzera mavara, kuwedzera mifananidzo kana odhiyo track; Pakupera kwebasa tinodzvanya bhatani hombe dzvuku Export vhidhiyo muchikamu chepamusoro kurudyi kurodha vhidhiyo nyowani, kuti igone kugoverwa kana kuchengetwa mundangariro.
Imwe saiti inonakidza kwazvo yekugadzira zuva rekuzvarwa nemavhidhiyo epati online iri Clipchamp, iyo ichienzaniswa nesaiti yapfuura inopa zvimwe zvakawanda zvingasarudzika kubva mubhokisi.
Paunenge uchangosaina mahara pane ino saiti (isu tinokwanisa zvakare kushandisa Google kana Facebook account kuti tiwane pakarepo maficha ese), tinoisa vhidhiyo kuti tigadzirise uye sarudza imwe yeanowanikwa mavhidhiyo matemplate, kuchengetedza yakawanda nguva. Pakupedzisira ingo tsikirira Tumira kunze kurudyi kumusoro kurodha pasi kana kugovana vhidhiyo.
Kana isu tichida kushandisa mamwe epamhepo vhidhiyo ekugadziridza masaiti isu tinogona kuenderera kuverenga mumutungamiri wedu Pamhepo vhidhiyo montage uye vhidhiyo ekugadzirisa masosi ane remixes uye akakosha mhedzisiro.
Kugadzira vhidhiyo yezuva rekuzvarwa kana yemhuri pati, isu hatifanirwe kunge tiri vatungamiriri: kushandisa zvishandiso zvakaratidzwa pamusoro apa zvatinokwanisa tora mukana weakagadzirira-akagadzirwa matemplate kana masitaera, saka unogona kurodha vhidhiyo uye kurisimudza zvinoshamisa nekungodzvanya mashoma kana matepi. Kana isu tiri vanoda vhidhiyo yekugadzirisa, ese masosi, kunyorera uye zvirongwa zvinoratidzwa zvinotibvumidza isu kuita nemaoko, kusunungura kugona kwedu.
Kugadzira akasekesa uye akanaka mavhidhiyo ekugovana pasocial network, isu tinokurudzira iwe kuti uverenge edu magwara Kunyorera kugadzira nyaya kubva kumifananidzo nemimhanzi mavhidhiyo (Android - iPhone) mi Gadzira Looping Boomerang Vhidhiyo uye Gadzirisa (Android App).